I-China Amafutha wokumba nokuqedela uketshezi- ifektri yokwakha i-sodium kanye nabakhiqizi | Pulisi
Ukumba uwoyela nokugcwalisa uketshezi- ukwakheka kwe-sodium
Imikhiqizo ithuthukiselwe ukufeza izidingo zakho
Imikhiqizo yethu iguqulwe ngokuhlukile ukuze ichaze kahle i-brine futhi igcwaliswe, futhi iyahambelana nezengezo ezibucayi zepolymer. Ama-brines angokwakheka aphakamisa ukuqina kanye nemikhawulo yokushisa yama-biopolymers asetshenziselwa ukumba uketshezi, isibonelo i-xanthan gum. Ama-brines okwakheka asuselwa ku-sodium kanye / noma e-potassioum formate asiza kakhulu njengokudonsa amanzi okugcina kungonakalisi kanye nokugcwalisa uketshezi, anikeze amandla ukwakhiwa kwemigwaqo emide evundlile eqediwe emgodini ovulekile. Uketshezi oluhle lukhona futhi nokuzinza okuhle kakhulu kwe-shale kokubumba okubucayi kwamanzi / i-shale equkethe i-sandstone. Ama-brines amafomu aqukethe izinto zokwakha ezinesisindo okusho ukuthi azikho izinkinga ze-sag, i-ECD engcono (isilinganiso esilinganayo sokujikeleza), amazinga wokujikeleza okungcono kanye ne-ROP ethuthukisiwe (Rate Of penetration).
Ukugeleza kwamahhala kwe-Sodium Formate yethu nokukhululeka kokusebenzisa okuphathelene nesikhathi sokulinganisa kuncishisiwe ukugcina izindleko ziphansi. Ukuhlanzeka okuvelele kwamafomu ethu kukuvumela ukuthi wandise isivuno esivela emthonjeni. Sizibophezele ekwenzeni uphenyo lobuchwepheshe ukuze sikusize ekuxazululeni izingqinamba zensimu futhi uthuthukise ukwakheka okusha okususelwa ku-fluid.
Isikhathi sokuthumela: Jun-02-2017